नेपाल फाइनान्सको हकप्रद शेयर भर्ने आज अन्तिम दिन – HostKhabar ::
नेपाल फाइनान्सको हकप्रद शेयर भर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौं : नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले मंसिर ४ गतेदेखि विक्री खुला गरेको १२५ प्रतिशत हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने आज मंसिर २४ गते अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले १ बराबर १।२५ को अनुपातमा रू.१६ करोड ९७ लाख ५० हजार ६२५ बराबरको १६ लाख ९७ हजार ५०६ दशमलव २५ कित्ता हकप्रद शेयर विक्रीमा ल्याएको हो ।
हकप्रद प्रयोजनका लागि कम्पनीले कात्तिक ६ गते बुक क्लोज गरेकाले कात्तिक ५ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । यस हकप्रदलाई इक्रा नेपालले इक्राएनपी आईपीओ ग्रेड ५ रेटिङ प्रदान गरेको छ । ग्रेड ५ ले कम्पनीको आधारहरु कमजोर रहेको संकेत गर्दछ । हाल यस कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १३ करोड ५८ लाख १ हजार रहेको छ । हकप्रद पश्चात यो पूँजी रू. ३० करोड ५५ लाख ५१ हजार पुग्नेछ ।
हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल फाइनान्सको केन्द्रिय कार्यालय तथा अन्य शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै आस्वा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
योे हकप्रद शेयर विक्री गर्न कम्पनीले असोज १९ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको हो । हकप्रद शेयर विक्री गर्न भने कम्पनीले गत फागुन २९ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।